महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलताका सवाल - Karnalipatra
महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलताका सवाल
कर्णालीपत्र संवाददाता ७ असार २०७७, आईतवार १८:३७
नारी वा स्त्री भन्नाले मानवीय जैविक भिन्नतालाई जनाउँछ । छोरा÷छोरी वा पुरुष र स्त्रीलाई चिनाउने प्राकृतिक नैसगिक भेद नै जैविक लिंग भेद हो । जुन मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर समाजद्वारा निर्धारण गरिएका महिला र पुरुषबीचका फरकफरक भूमिकालाई सामाजिक लिंगभेद भनिन्छ । जुन मानिसद्वारा सिर्जित हुन्छ र परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
महिला भएकै कारण स्त्री जातिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने काम पनि उस्को क्षमता, पारिवारिक संरचना, शिक्षाको स्तर तथा उसको सामथ्र्यता आदिमा भर पर्छ । जुन घरमा महिला हरेक पक्षले शसक्त छ भने निश्चय नै त्यस महिलाको निर्णयमा पहुँच हुन्छ ।
महिला सशक्तिकरण भन्नाले महिलाले आफूमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई आफै सजिलैसँग सामाधान गर्न सक्नु नै हो । अर्को शब्दमा महिला सशक्तिकरण महिलालाई कुनै पनि विषयवस्तु बुझ्न, प्राप्त गर्न र सही रूपमा उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु हो । महिला सशक्तिकरण एउटा यस्तो शक्ति हो जसले घरपरिवार, समाज र राष्ट्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । जुन देशका नारीहरू शिक्षित छन् त्यहाँ महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव, दमन र शोषण कम छ । उनीहरु जुनसुकै ठाउँमा पनि मुकाविला गर्न तयार छन् । राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सशक्तिकरण छ भने अवश्य पनि राष्ट्रले सक्षम नागरिक उत्पादन गर्छ ।
जुन समाजमा महिलाहरू सशक्त छैनन्, त्यहाँ दमन, अन्याय र अत्याचार छ । यदि महिला स्वयम् सक्षम र सवल छन् भने त्यसले समाज विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । महिला सशक्तीकरणले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाइ उनीहरूमा आउने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ ।
सशक्तिकरण र उद्यमशीलता
महिला सशक्तिकरण र उद्यमशीलताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । उद्यमशीलताको विकासले महिलाको शसक्तिकरणमा सहयोग पु¥याउँछ भने शशक्तिकरणले उद्यमशीलताको विकास ।
जुन देशका नारीहरू शिक्षित, आर्थिक रुपले सक्षम छन् र त्यहाँ महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कम छ भने राष्ट्रको विकासले पनि तीव्रता पाइरहेको हुन्छ । जुन समाजमा महिलाहरू सशक्त छैनन भने विकासको प्रवाह रोकिएको हुन्छ । सशक्तिकरणले महिलालाई आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाइ उनीहरुलाई सक्षम बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
उद्यमशीलताले उद्यमी र उसको क्रियाकलापलाई जनाउँछ । उद्यमशीलताको विकासले देशको आर्थिक विकासलाई पनि सुदृढ बनाइरहेको हुन्छ । किनकी देशमा पूजी निर्माण, धनआर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशीलताको जरुरत छ । उद्यमशीलतको माध्यमबाट राजस्वमार्फत सरकारी कोष बलियो बनाउन पनि फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । आज चीन र जापानले गरेको विकास उद्यमशीलताको एक नमुना हो । त्यहाँ कोही पनि मानिस खाली वस्दैनन्, न उनीहरु विदेशी सामग्री भित्रन दिन्छन् । आफूलाई चाहिने सामग्री आफै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्नु उद्यमशीलताको सवल पक्ष हो । जसले स्थानीय साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न पनि सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
यसरी उद्यमशीलतामार्फत व्यक्ति, समाज एवम् राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भने देशलाई समृद्धिको मार्गमा हिडाउन सकिन्छ । महिला उद्यमशीलताले अवसरहरुको पहिचान र विश्लेषण गरी नयाँ उत्पादन प्रक्रियाका सम्पूर्ण क्रियाकलाप जस्तैः लगानी, स्थापना, सञ्चालन, संगठन र नियन्त्रण गर्ने जस्ता सम्पूर्ण कार्य वा क्रियाकलाप महिलाद्वारा गरिने भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिमा महिलाको सहभागितालाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । तर लगानीको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सामाजिक तथा धार्मिक कारणले पुरुषहरुको तुलनामा महिला उद्यमशीलताले गति लिन सकेको छैन । महिलाले पारिवारिक वन्धनका कारणले उचित समय दिन नसक्ने समस्या अहिले टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ ।
यी समस्या समाधान गरी महिला उद्यमीको विकास गरेमा उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाइ स्वावलम्वी वनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा परिवारको जीवनस्तरमा वृद्धि र पारिवारिक द्वन्द्व कम हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार घट्छ । सामाजिक द्वन्द्व र वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरण हुन्छ । स्थानीय साधन र स्रोतको परिचालन गरी उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारीको दर बढाउन सरकारले महिलामा लगानी बढाउन जरुरी छ ।
देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याइ महिलालाई उद्यमशीलताको मार्गमा हिँडाउन जरुरी छ । जसबाट मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ ।
(लेखक निर्माण व्यवसायी एवं उद्यमी हुन् ।)
पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अबरुद्ध
७ असार २०७७, आईतवार १८:३७
सुर्खेत, ८ असार । कर्णाली राजमार्गअन्र्तगत खाँडाचक्र नगरपालिका–३ को गल्लीमा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अबरुद्ध भएको छ । आइतबार राती भएको अविरल वर्षाका कारणले कर्णाली राजमार्गमा पहिरो गएको हो । पहिरोका कारणले कर्णाली राजमार्ग अबरुद्ध भएको र अहिले खुलाउने प्रयास जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले जनाएको छ । सडकभन्दा […]
११ आश्विन २०७६, शनिबार ०९:२६
माननीयज्यू सभ्य बोल्ने कि ?
१४ श्रावण २०७७, बुधबार १४:०१
पहाडमा पहिरोको पिरलो
११ बैशाख २०७७, बिहीबार १५:०१
संघीयतामा कोरोना संक्रमणको खतरा
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १४:२४
जिम्मेवार नागरिक बनौं
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ११:५१
लकडाउन खोलेर जनजीवन यसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ?
१० श्रावण २०७७, शनिबार १४:०२
सूर्य थापाको प्रश्न–‘तथ्यकाे आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन ?’